China Vehicle Kudzora Circuit Bhodhi Gungano Kugadzira uye Fekitori | KAISHENG pcb
Midziyo Yesimbi: HASL inotungamira mahara Mamiriro Ekugadzira: SMT + Germinales: 2 rukoko pcb
Chinyorwa Chekutanga: FR-4 TG 135 Certification: SGS, ISO, RoHS MOQ: Kwete MOQ
Solder Mhando: Kutungamira-Mahara Imwe-Stop Services: Turnkey pcb Assembly Kuedzwa: 100% AOI / E-bvunzo / Kuedzwa Kwesimba
Keywords: Pcb Assembly Sevhisi, Pcb Gungano Maitiro, Pcbhu hwevanhu, Pcb Assembly Vagadziri
Paunotisarudza sekambani yako inoshandira pamwe PCBA, urikusarudza kubatana nebasa rinoendesa zvakanakisa. Yedu pcb gungano masevhisi anosangana nemhando yepamusoro mabhenji uye anoteedzera IPC Kirasi 3, RoHS uye ISO 9001: 2008-chitupa zviyero. Uye zvakare, tinogona kubata chero mhando pcb, ingave yakapetwa kaviri kana isina-mativi, SMT, kuburikidza-gomba kana yakavhenganiswa-gungano chirongwa. Chero zvaunoda kuita, tinogona kuzviita!
Ticharamba tichisangana newe nguva dzose kubva pakutanga kweprojekti kusvika kumutsetse uye tinokuchengeta iwe muchiuno kubva mukugadzira kusvika kugungano. Izvi zvinogona kukubatsira iwe kuchengetedza mari uye kushushikana nemitengo yepasi yePBB, kupfupisa nguva yekumirira uye nekupa yakakwira mhando zvigadzirwa. Tinoda kukusevha nguva nesimba kuti iwe ugone kutarisa pane ako mapcbcbg - usanetseke nezve minutiae yekugadzira maitiro.
PcbFuture ndeye inotungamira pcb mhinduro mupi. Tinogona kusangana zvako pcb zvinodikanwa kubva kuzvikamu zvekutenga kuenda kugungano remagetsi. Isu tinokubatsira nhanho imwe neimwe yenzira uye nekukupa hunyanzvi hwakazara uye kuvimbiswa kwemhando yepamusoro.
Ndeapi mafaera uye zvinyorwa zvaunokumbira kune angu PCBA maodha?
Tinoda maGerber mafaera, Centroid dhata uye BOM kune ako PCBA maodha. Sekuisa kwawakaita yako PBB odha nesu, muchokwadi, kana yako PCB Gerber faira inosanganisira kudhinda kwechidzitiro, mhangura mhangura uye solder peta matete, iwe unongoda chete kutumira maviri ekupedzisira. Kana ako maFBB Gerber mafaera akashaikwa chero eaya matatu ataurwa pamusoro, ndapota utumirezve, sezvo ichi chiri chidiki chikumbiro chePCBA. Nezvakanakisa mhedzisiro, ndapota titumirewo magungano dhizaini, mirairo uye mapikicha kwatiri kuti tidzivise chero chakajeka uye kunyange kukanganisa kuiswa kwezvikamu, kunyangwe vazhinji vanoungana vasingade izvi.
Ndingaite sei kit zvikamu kana ndiri kuendesa akawanda maodha?
Akawanda makiti anogona kutumirwa mupakeji imwe, asi pasuru yega yega inofanirwa kumakwa neimwe nhamba yekuodha
Zvikamu zvinoshandiswa pamabasa akawanda zvinofanirwa kuiswa mucherechedzo kuti uone kuti zvakagovaniswa
Ita shuwa yekupa zvikamu zvishanu% zvekuwedzera kune yega vhezheni vhezheni
Kuti uwane rumwe ruzivo, tarisa yedu inotungamira nongedzo kune anotumira zvikamu.
Tine hunyanzvi pcb R&D, dhizaini, timu yekugadzira, ine timu yakasimba yeinjiniya, ruzivo rwakapfuma, vanoziva nezvekugadziriswa kweprojekti uye dhizaini dhizaini, uye yakagadzirirwa iwe kugona kwechirongwa chekugadzira. Nesimba rakasimba, kugadzikana kwemhando uye nekukurumidza kutumira, inozivikanwa zvakanyanya nevatengi.
Pashure: Turnkey Yakachipa pcb Assembly
Zvadaro: Vehicle GPS Tracker Dunhu pcb Assembly
Smart TV Bhokisi pcb Assembly Main